थारू जातीको एक चिनारी !! | United Youth For Madhes (UYFM)
थारू जातीको एक चिनारी !!
Posted on March 19, 2010 by UYFM	थारु जातिमा प्रचलित थरहरु :
थारुहरुमा धेरै थरहरु प्रचलित पाइन्छ ! चौधरी थर पूर्वदेखि पश्चिमसम्म सबै क्षेत्रका थारुहरुले लेखाउँदै आएका छन् ! चितवन तिर महन्त र महतो, कसै-कसैले महत र पश्चिमतिर सुनाहा वा दहित लेखाउने गर्दछन !
थारु समुदाय र तिनीहरुको एतिहासिक झलक :
मधेसको पूर्व झापादेखि पश्चिममा कंचनपुर तथा सुर्खेत उपत्यका सम्म बसोबास रहेका थारूहरु नेपालका पुराना बासिन्दा हुन, यस दुईमत नहोला ! मधेसको उत्तरी भाग र चूरे महाभारत बिचसम्म यिनीहरु आबाद छन् ! सन २००१ को जनगणनामा पन्द्र लाख चौतीस हजार जनसंख्या रहेको थारू मधेसमा सबै भन्दा बढ़ी जनसँख्या भएको एउटा पुरानो जनजाती हो ! थारूहरुको अध्यन गर्न वा सम्पूर्ण थारू जातीलाई चिन्न विभिन्न क्षेत्रका थारूका बारे मा जान्नु पनि उतिकै जरुरी छ उदाहरणका लागी पूर्वका थारूहरु मैथिल संस्कृति भएका जात जाती संग बढ़ी घुलमिल छन् र मैथिलि बोल्न र बुझ्न सक्छन भने कपिलवस्तुदेखि पश्चिमका थारू अलि बेग्लै स्वाभाव भएका छन् र बेग्लै भाषा बोलने गर्छन ! पूर्वको अनुपातमा पश्चिमका थारूहरू नीकै सोझा र कमजोर सामाजिक – आर्थिक अवस्थाका छन् ! मोरंगिया ( सुनसरी-मोरंग), सप्तरी – उदयपुरदेखि पर्सा , चितवनदेखि कपिलवस्तु र दांगदेखि पश्चिम गरी चार क्षेत्रमा बसोबास गर्दै आएका थारूहरु बिच सामाजिक , सांस्कृतिक र आर्थिक अवस्था फरक फरक पाइन्छ ! थारूहरुको इतिहासका सम्बन्धमा हालसम्म विद्वानहरुमा एक मत छैन !
इस्वी संवतको एघारौ शताब्दीमा मुस्लिम इतिहासकार अलबेरुनी तिलवट मुलुकको बारे उल्लेख गरेका छन् जंहा कालो वर्ण र थेप्चे नाक भएका तुर्क जस्ता देखिने तरु अर्थात तारु भन्ने निवासीहरूबसेका छन् भनेका छन् ! त्यस्तै सोर्हौ शताब्दीका तिब्बती भिक्षु र इतिहासकार तारा नाथले चम्पारनमा बस्ने Tha-ru’-brygud को उल्लेख गरेका छन् ( थारु जतिको अध्यन , रजौर )
थारुका केही पक्ष हरु अध्यन गरे हो भने तिनीहरु इतिहास बारे केही अनुमान लगाउन सकिन्छ ! तर वैज्ञानिक प्रमाणनिता को अभावमा यसै हो भन्न सकिन्न ! सुदुरपश्चिमका राना थारुमा महिलाहरुको स्थान उच्च पाइन्छ ! मुस्लिम आक्रमण संगै यिनीहरुका पुरुष युध्दमा होमिए र पछी नोकर चाकर संग भागेर यता आएर तिनीहरुसंगै विवाह गरी बस्न थालेको भनाइ हालसम्म प्रचलित छ हुन् सक्छ ‘थर’ बाट आएको राजपुतरमणी र उनका भृतय एवमं स्थानीय बासिन्दाका संकर सन्तति पनि थारु समाजका होउन ! ( जनक लाल शर्मा , २०५८ ) पश्चिममा यिनीहरुको मूल बसोबास दांग-देउखुरी हो र यंहीबाट पछी कैलाली – कन्चनपुर् सम्म फैलिएको पाइन्छ ! त्यस्तै पूर्वमा कोशी वारी र मध्यमधेसका जिल्लाहरुमा थारुहरु खाँ थर लेख्दछन ! सप्तरी देखि पर्साका थारुहरु आफुलाई कोचिलाका थारु भन्न रुचाउ छन् ! सम्भवत: गौरवशाली कोच राज्य र त्यँहाको सम्बन्ध वा त्यँहाबाट विभिन्न कारणवश आएको हुनाले आफुलाई कोचिला भनेको हुनु पर्दछ वा पहिले कोचिला राज्य र वंश हुनुपर्दछ ! केहि तिरहुतिया पनि भन्दछन ! त्यस्तै राजवंशीहरु पनि आफुलाई कोचिला भन्दछन ! थारुहरुको बसोबास मधेसको उत्तर र चुरे क्षेत्रका घना जंगल डर लाग्दा जंगली जनावरहरु र मलेरियाको प्रकोप हुने ठाउंहरुमा पाइन्छ !
केहि विद्वानहरुले शाक्यवंशी सन्तानका रुपमा थारु जतिलाई चित्रण गरेको पाइन्छ ! प्राचिन कपिलवस्तु राज्यको अवस्थिति तथा थारुहरुको यस क्षेत्र मा बसोबास र यिनीहरुको शान्ति प्रिय स्वभाव लाई हेर्ने हो भने यिनीहरु शाक्यवंशका सन्तान हुन् भन्ने कुरा मान्न सकिन्छ ! बुद्धको समयमा राप्ती नदी आसपासमा कोशल राज्य रहेको उल्लेख छ ! थारु हरुको यस सँगको सम्बन्ध के – कस्तो हुन् सक्छ , अध्यन हुनु आवश्यक छ ! तर अच्चमको कुरा त के भने थारुहरुमा बौध धर्मको अलिकति पनि प्रभाव कंही भेटिदैन ! बौध धर्म ग्रन्थ मा पनि थारुहरु सम्बन्धी केही उल्लेख पाइदैन ! यसबाट दुई कुराहरु अनुमान लगाउन सकिन्छ ! थारुहरुको आगमन यस क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा भएको हुनु पर्दछ या त् हालका थारुहरु पहिले अर्को नामबाट चिनिन्थे होला र पछी थारु जातिका रुपमा प्रसिद्ध हुन् पुगे ! यसकालागि बैज्ञानिक खोज अनुसन्धानको जरुरी छ ! नेवारका शाक्य र ज्यापू तथा थारु बीच को सांस्कृतिक र एतिहासिक अध्यनबाट पनि केही कुरा थाहा पाउन सकिन्छ होला !
यी सब कुराहरुलाई विचार गर्ने हो भने एउटा सम्भावना भनेको थारुहरु निकै पहिले मुस्लिमहरुको बढ्दो प्रभाव वा अन्य कारणहरुबाट सुरक्षित स्थानको खोजिमा यस क्षेत्र सम्म आएको हुन् सक्छ ! भारतमा मुस्लिमहरुको प्रभाव संगै ‘थार’ क्षेत्रबाट सुरक्षित स्थानको खोजीमा यँहासम्म आएको भनाइ सुन्न पाइन्छ ! थार क्षेत्रबाट आएकाले थार , थौर र पछी थारु कहलिन थालेको हुनुपर्दछ ! थार र थारुको सम्बन्ध खोजीको बिषय हुन् सक्दछ ! सम्भवत: राजपुतहरुको उदय संगै र राजस्थानमा मुस्लिमहरुको प्रभाव संगै यिनीहरुको आगमनको समय मान्न सकिन्छ ! आठौ -दसौ इस्वीलाई आगमनको समय मान्न सकिन्छ ! त्यस्तै हालका थारु र प्राचीन तुर्क जाती संगको सम्बन्ध के-कस्तो थियो अध्यन हुनुपर्दछ ! खाँ थर तुर्कबाट आएको मानिन्छ , नेपालका शाह वंश पहिले खाँ थिए भन्ने कुरा सुन्न पाइन्छ ! तुर्कहरु मध्यएसियाको घाँसे समथर मैदानबाट भारत सम्म आएका हून ! मुस्लिमहरुको आक्रमण सँगैभारत को तराईको समथर भाग हुदै नेपालसम्म आएको हुनु पर्दछ ! यिनीहरु घाँसे मैदानबाट आएकाले नै नेपालमा जंगल छेउछाउ घाँसे मैदानमै बस्न पुगेको हुन् सक्दछ ! वर्णको हिसाबले पनि थारु सँग नजिक मानिन्छ ! कँही-कतै सेनवंश सँग थारुहरुको सम्बन्ध थियो भनिन्छ ! यी सब कुराहरुको बैज्ञानिक पद्धति बाट अध्यन -अनुसन्धान भएमा नया कुरा आउन सक्छन !
थारुहरु गौतम बुद्ध र सम्राट अशोकका सन्तान हुन् ! गढीमाई तलुजा भवानी ( कंकालिनी माई) को मन्दिर सिम्रौनगढमा अवस्थित छ र यसको पुजारीमा थारु रहेका छन् ! ( सुबोध कुमार सिंह, सन् २००७) यसका आधारमा कर्नाटवंशीयहरु कर्नाटबाट आएको कुरा बताउदै आएका छन् र यो प्रमाणित पनि भैसकेकोछ ! तर अच्चमको कुरा त के छ भने कर्नाटवंशीयहरुको पतन पछी हरि सिंह देवले आफु सँगै काठमाडौं उपत्यका ल्याएका आठ जातिमा थारुहरुको कंही कतै उल्लेख छैन ! त्यस्तै मौर्यहरु पनि थारु नै थिए भनेर सिंह दाबी गर्छन!
गढीमाई तलुजान भवानी ( कंकालिनी माई ) को मन्दिरको पुजारीमा थारु भएबाट यिनीहरुलाई पुरानो मान्न सकिन्छ, तर सेनवंश पनि थारु जतिका हुन् भन्नु खोजीको बिषय हुन् सक्छ !
जनक लाल शर्माले “नेपाली समाज एक अध्यन” मा थारुहरु बृज्जि अर्थात् दक्षिणमा बस्ने समाजलाई घृणास्वरूप बज्जि भन्दछन र थारुहरुको भोटान्तिक समाज सँग विवाह थियो भनेका छन् ! पूर्वी मधेस र रुपन्देही तिर यस सम्बन्धि थारुहरु सँग सोध्दा सबैले अनभिज्ञता प्रकट गरे ! दक्षिण तिरका वर्णव्यवस्था भएका जातिहरुबाट थारुको संस्कृतिक, सामाजिक र आर्थिक पक्ष नकारात्मक प्रभाव पर्ने किसिम बाट खासै हस्तक्षेप भएको पाइदैन ! बरु उत्तर तर्फबाट झरी आएका चलाख र उच्च जाति प्रति घृणा र आक्रोश पाइन्छ ! यिनीहरुमा कोचिला प्रतिको गर्व र राजपुत प्रतिको झुकावले पनि यिनीहरुको दक्षिणका जातीय व्यवस्था भएका जातिहरुसँग पहिलेदेखि सम्बन्ध थियो भन्न सकिन्छ ! थारु जाति र संस्कृतिका थारु लेखक गोपाल दहितले आफ्नो पुस्तकमा पहाडी लेखक हरुले थारुका बारेमा सही किसिमले नलेखेको कुरा भनेका छन् ! पहाडी लेखक हरुले थारुहरुका बारेमा लेख्दा यिनीहरुलाई दक्षिणका जातीय, वर्णव्यवस्था भएका जातिहरु सँग सम्बन्ध भएको नदेखाउने हरसम्भव प्रयास गर्दै आएका छन् ! तिनीहरु बीच फरक देखाउने र फोटो ल्याउने चतुर्याई हुदै आएको छ ! हाल सम्म राजा महेन्द्रको पहाडीकारण मजबुत बनाउने हेतुले जनजाती बारे यँहाका लेखकहरुले लेख्दै आएका छन् ! सही समाजशास्त्रीय र मानवशास्त्रीय विधिबाट गहन अध्यन – अनुसन्धानको खाँचो देखिन्छ ! यदि यिनीहरुको भोटान्तिक समाजसँग सम्बन्ध हुन्थ्यो भने यिनीहरु कि माथि पहाड तिर उक्लेन्न त् ? यिनीहरु किन समथर र औलो भुमि रोजे त् ? थारु भित्रका उपजाति र यिनीहरु बस्ने ठाऊँ नामहरु पनि पूर्णत: भारोपेली भाषा अन्तर्गत पर्दछन ! थुप्रै अनार्य जातिहरु पनि हिन्दु भएर उच्च जातिमा समावेश भएको कुरा इतिहासमा पढ्न पाइन्छ ! यी कारणहरुले पनि यिनीहरुको भोटान्तिक समाज सँग सम्बन्ध थियो भन्ने कुरामा खासै दम देखिदैन ! केहि मानिसहरु थारुलाई मंगोल मूल पनि भन्दछन ! तर मंगोल मात्र शतप्रतिशत नहुन सक्छ ! केहि थारुहरु मंगोल आर्य मिश्रित पनि पाइन्छन् !
यिनीहरुको वर्ण र रहनसहनले पनि यिनीहरु मूलरुपमा मधेसको हावापानीबाट आएका हुन् सहजै भन्न सकिन्छ ! सत्य के हो भने थारुहरुको केही संख्या चितवनदेखि कैलालीबाट दक्षिण तर्फ भारतको उतर प्रदेश र उतरांचलमा पनि रहेको छ! उतर प्रदेशको चम्पारण जिल्लामा रहेको थारुका बारेमा श्रीनिवास र रन्जनले गरेको अध्यनबाट थारुहरुको संख्या दक्षिण तिर पनि रहेको छ भन्ने बुझाउँछ ! दांगका सम्पन्न थारुका छोराछोरीहरु उतै पढ्न जाने गरेको कुराले पनि यिनीहरुको सामाजिक सम्बन्धलाई दक्षिणसँग छैन भन्नु उपयुक्त हुदैन ! शाक्यवंशीका सन्तान भएकाले नै उनीहरु आफुलाई क्षत्रिय भनेको हुन् सक्ने तर्क श्रीनिवास र रन्जनको रहेको छ ! भारततिरका थारुहरु तुलनात्मक रुपले सम्पन्न मानिन्छ !
थारुहरु मैथिली, भोजपुरी र पश्चिमतर्फ अवधी र थारु भाषा बोल्दछन ! भाषाको सवालमा पुर्व झापादेखि पर्सामा मैथिली, मध्यतर्फ भोजपुरी र पश्चिमतर्फ अवधि भाषाको विशेष प्रभाव रहेको छ! थारु र अन्य मधेसी मुलका मानिसहरुबिच भाषाको समस्या छैन ! एकअर्काको भाषा सजिलै बुझ्दछन ! पुर्व तर्फ ठाडो किसिमको मैथिली बोलिन्छ ! मोरंगिया (पहिले सुनसरीलाई मोरंगमा राखिएको थियो) थारुहरुको भाषा आफ्नै किसिमको केही फरक छ ! तर मैथिलीसँग निकै मिल्दछ ! सप्तरीदेखि पश्चिम वागमतिसम्मका थारुको भाषा ठाडो मैथिली किसिमको छ ! त्यँहाको प्रभावले त्यसो भएको हुन् सक्दछ ! वागमतिदेखी रुपन्देहीसम्म भोजपुरीको प्रभाव रहेको छ ! चितवनको थारु भाषा केही फरक रहेको पाइन्छ ! नवलपरासी-कपिलवस्तु तिरका थारुहरुको भाषा सम्बन्धि सोध्दा सबैले भोजपुरी भाषा भनेको थिए ! दांगदेखि पश्चिम का थारुहरुको भाषा केवल थारुहरुले बोल्ने थारु भाषा हो ! तर पुर्व र पश्चिमका थारुहरुको समान भाषा भने छैन ! थारुहरु आफ्नो भाषालाई थारु भाषा भन्न रुचाउँछ!
पुर्वी तथा मध्यमधेसमा थारुहरु मधेसका जातीय समुहहरुसँग सम्पर्कमा रहनाले यिनीहरुको शिक्षाको स्तर राम्रो रहेको मान्न सकिन्छ ! तर जनसंख्याको अनुपातमा यसलाई राम्रो मान्न सकिदैन ! जनसंख्याको अनुपातमा शिक्षाको स्तर ज्यादै खराब मान्नुपर्छ! शिक्षाको सवालमा सप्तरी देखि पर्सासम्मका थारुहरु अन्य ठाउँका थारु भन्दा अगाडी छन् ! यस क्षेत्र का थारुहरुले राजपुतहरुले लेखाउने सिंह थर लेखेबाट यिनीहरु आफुलाई अरु जातिका भन्दा कम ठान्दैनन् भने बुझ्न सकिन्छ ! यस क्षेत्रका थारुहरु बयालीस / पेशागत जतिको संस्कृतिबाट निकै प्रभावित हुदै आएका छन् र त्यसलाई अनुसरण गर्दै आएका छन् ! त्यसपछी सुनसरी, मोरंग र झापाका थारुहरु पर्छन ! पश्चिमका थारुहरुमा अशिक्षाले जरा गाडेको छ ! स्वभावले थारुहरु ज्यादै सोझा र इमान्दार हुन्छन ! राणाकालअघिसम्म यिनीहरु सयौं बिघाका मालिक थिए ! जग्गा जमिनको कुनै कमि थिएन ! औलो उन्मुलनपश्चात मधेसमा विकाशको ढोका खोलिदियो ! यससँगसँगै भूमिसुधार कार्यक्रम ल्याइयो ! तर यसले किसानको जग्गालाई संरक्षण गर्नुको सट्टा यस बाट धेरैले गुमाउनुपर्यो भने पहाडबाट झरी आएका टाठाबाठाहरुले फाइदा लिए ! पहाड र मधेसका जनजातीहरुको कथाव्यथा लगभग उस्ताउस्तै छ ! पहाडी उच्च जातिहरुले त यसको ठुलै मुल्य चुकाउनुपरयो ! स्वयम राज्यद्धारा नै यस्ता कार्यहरु गर्न प्रोत्साहन गरेको कुरा चाँही सबै भन्दा खड्केको कुरा हो !
२०६३ सालको कुरा हो , भालुवाङमा त्यंहाका एक ठेकेदारबाट नेपालमा सबैभन्दा बढी श्रमिक ( लेवर काम गर्ने) आपूर्ति दांगबाट र त्यसमा पनि थारुहरु रहेका कुरा थाहा भयो ! रसुवा को मैलुंग जलविधुत लागि त्रिशुली को किनारैकिनारको बाटो खन्ने कामका लागि दुई-अढाई सय दाङ्का थारुहरु खटिएको थियो र यस बाट पनि थारु हरुको अवस्था कस्तो रहेको बुझ्न सकिन्छ ! लाखौं संख्यामा रहेका कमैयाहरुको स्तिथि त झन भयावह छ ! तिनीहरुसँग आफ्नो जग्गा-जमिन छैन ! पुर्व –पश्चिम राजमार्ग खुलेपछि मधेसमा आर्थिक गतविधि तीव्र हुन् थाल्यो ! राजमार्ग मधेसको उतरी क्षेत्र विशेष गरी थारुहरुको बसोबास हुदै गए पनि यसबाट यिनीहरुले अपेक्षाकृत कुनै फाइदा लिन नसकेको देख्न सकिन्छ ! बरु राजमार्ग वरपर पहाडेहरुको बस्ति बढ्दै गयो र उनीहरु यसबाट फाइदा लिए ! मधेसमा थारु बस्तीमा रहेका चितवन राष्ट्रिय निकुन्ज, बर्दिया राष्ट्रिय निकुन्ज, शुक्लाफाँट निकुन्ज तथा कोशी टप्पु महत्वपूर्ण पर्यटन क्षेत्र रहँदारहँदै थारुहरुले यसबाट केही फाइदा लिन नसकेको देखिन्छ ! माथिबाट झरेका चलाख मानिसहरुले फाइदा लिदैं आएका छन् ! थारुहरु हाती चलाउनमा सिमित छन् त्यंहाको होटल व्यवसायमा थारुहरुको कुनै उपस्थिति देखिदैन ! पहाड र हिमालका पर्यटकीय क्षेत्र मा त्यँहीका जनजातीहरुले फाइदा लिदै आएका छन् भने मधेसमा ठिक उल्टो रहेको छ ! यसबाट पनि थारुहरुको सोझोपनबाट कसरी अरुहरुले फाइदा लिदै आइरहेका छन् र थारुहरु कसरी आफ्नै साधन जानु नितान्त आवश्यक छ ! राणाकालीन जातीय वर्णमा मासिने मतवाली अर्थात् दास बनाउन मिल्ने श्रेणीमा राख्नाले पनि यिनीहरु पछी पर्न गए !
यसरी थारुहरुको इतिहास तथ्यगत रुपमा स्पष्ट भेटिदैन ! कहिले मौर्य, कहिले बुद्ध, अशोध, सेनवंश, चितौड र थार मरुभूमिमा घुमिरहेको छ !
थारुहरुको जनसंख्या- नेपालका थारु जातिहरु यस्ता जाती हुन् जो मधेसका हरेक जिल्ला र पहाडी जिल्ला ( सुर्खेत) सम्म बसोबास गर्दछन ! चुरे क्षेत्रका उपत्यकाहरु दांग र माडी तथा उदयपुरको उपत्यका क्षेत्रका पुराना बासिन्दा मध्ये एक हुन् ! सन् २००१ को जनगणनामा करिब पन्ध्र लाख भन्दा बढी थारुहरु भएको उल्लेख पाइन्छ !
सामाजिक स्तरीकरण र बनावट– थारु समाज भित्र आफ्नै किसिमको स्तरीकरण रहेको छ ! थारुहरुको सामाजिक बनावट को अध्यन गर्न थारु समुदाय को सम्पूर्ण अध्यन पुरा हुन्छ ! ति हुन् – मोरंगिया ( कोशिपुर्व का थारुहरु ), कोशीदेखि पर्साका कोचिला / तिरहुतिया थारु, चितवनदेखि कपिलवस्तु सम्मका थारु र पश्चिममा थारु (दांग वा सोभन्दा पश्चिमका) ! तर हामीकहाँ पश्चिममा थारु र केही मात्रामा खोशी पुर्व का थारुको अध्यन गरेर सम्पूर्ण थारु जाती लाई चिन्ने गल्ती हुदै आएको छ !
नेपालको थारु समुदाय
यी चार मध्ये मोरंगिया, कोचिला र चितवन –कपिलवस्तुका थारु पश्चिमको तुलनामा विकसित र हिन्दु जातीय व्यवस्था बाट निकै प्रभावित र त्यसलाई ग्रहण गर्दै आएको पाइन्छ ! पश्चिमका थारुहरु कम विकसित छन् र सामाजिक र आर्थिक रुपमा पिछिडिएका पनि छन् ! मोरंगिया थारुमा पनि तिन उपसमुहहरु रहेका छन् – मोरंगिया , सप्तरी मुलका मोरंगिया र रौतार, खवास, खडर, हेलठेलिया तथा लम्पुछिया ! पहिले यी समूहहरुबीच विवाह चल्दैन थियो, तर अहिले सबै थारुमा विवाह चल्दछ!
प्रथम र तेश्रो कोटिका थारुहरु कोशीपारिका प्राचिन थारुहरु हुन् ! पहिले सुनसरी छुटै जिल्ला थिएन, मोरंग अन्तर्गतै पर्दथ्यो ! त्यस कारण कोशी पुर्वका थारुहरुलाई मोरंगिया थारु भनिदै आएको हो ! दोस्रो समुहका थारुहरु पछी सप्तरी बाट आएकाले यिनीहरुलाई सप्तरीया थारु भनिन्छ ! यी थारुहरुको बसोबास पर्सासम्म भेटिन्छ ! शिक्षाको क्षेत्रमा सप्तरीया थारु अगाडी मानिन्छन् ! सप्तरी देखि पर्सा सम्म थारुहरु धेरै अर्थ मा मैथिली संस्कृति बाट कुनै न् कुनै रुपमा प्रभावित हुदै आएका छन् र ग्रहण गर्दै आएका छन् ! यस क्षेत्र का थारुहरु आफुलाई कोचिला भन्दछन ! यस भित्र लेखी, पंजियार र खाँ थर भएका थारुहरुको बसोबास पाइन्छ ! लेखी उपसमूहका थारुहरु सामाजिक रुपमा उच्च मानिन्छन् ! यस भित्र पनि उपसमूह हरु रहेका छन् ! यिनीहरुमा रक्तसम्बन्धबाहेकमा तिन देखि सात पुस्ताबारेर विवाह गर्ने चलन छ ! वास्तवमा सप्तरीदेखि पर्सासम्मका थारुका बारेमा हालसम्म कमै अध्यन भएको छ ! यिनीहरु मैथिली र भोजपुरी संस्कृतिसँग बडो घुलमिल को अवस्था मा बस्दै आएका छन र आफ्नो मौलिकतालाई पनि बचाउन सफल देखिन्छन ! पूर्वतर्फ गाउँ को मुखिया लाई गच्छेदार भन्ने गरिन्छ, तर अहिले अपभ्रंश भएर गह्दार भनिन्छ ! समाजमा केही समस्या आयो वा ग्रामदेवताको पूजा गर्नु परयो भने त्यसका लागि व्यवस्था गरिदिने काम यिनीहरुको हुन्थ्यो ! सप्तरीतिर जेथरैतहरुले पुजा गर्ने चलन छ !
चितवन – नवलपरासी- कपिलवस्तुतर्फ पछुवा/पश्चिमा , कठरिया, खंगडा, रौतार, खौसिया, कनफट्टा, कबर जोगी र दडोरिया प्रमुख रुपमा रहेका छन् ! यसका अतिरिक्त केही संख्या मा बाँतर र खवास थारु पनि रहेका छन ! कवर जोगी थारुले हलो जोत्नु हुदैन भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ! पहिले-पहिले यी थारुहरु बिच विवाह चल्दैन थियो, तर अब विवाह चलन थालेको छ ! रौतार थारुहरुलाई पुर्बिया पनि भनिन्छ ! त्यस्तै नवलपरासीमा बस्ने थारुहरुलाई नवलपुरिया भनिछ ! कठरिया र पछीमा थारुहरु आफुलाई स्तरीकरणमा उच्च ठान्दछन ! कठरिया थारुहरु आफुलाई गौतम बुद्ध को नजिकका सन्तान का रुप मा मान्दछन ! तर बौद्ध धर्मग्रन्थहरुमा थारु जाती सम्बन्धि केही उल्लेख छैन ! नवलपरासी-कपिलवस्तुतर्फ अहिले पनि धेरै थारुहरु जमिन्दार छन् ! तर यसै क्षेत्रका राजमार्गछेउछाऊका थारुहरुसँग जग्गा –जमिन निकै कम रहेको पाइन्छ ! यो हरेक ठाउँमा देख्न सकिन्छ ! चितवनमा महतो थरका थारु पाइन्छन्, तर केही थारुहरुले महतोलाई महत लेखाउन थालेका छन् ! चितवन का थारु लाई चितौनिया थारु भनिन्छ !
पश्चिम तिर दंगौरा, देउसुरिया, कठरिया र राना थारुहरु रहदैं आएका छन् ! दंगौरा (कैलाली र कन्चनपुरतिर दंगौरा पनि भनिन्छ) थारुहरु मूल रुपमा दांग –देउखुरीका थारुलाई भनिन्छ ! यिनीहरु बाँके, बर्दिया, कैलाली र कन्चनपुरमा प्रशस्तै भेटिन्छ ! बाँके र बर्दियामा निकै पहिले दंग्बत गई बसेका थारुहरु अहिले देउसुरिया थारुबाट चिनिन्छन ! यिनीहरु अवधीभाषीबाट निकै प्रभाबित छन् ! कठरिया थारु बिशेष गरी कैलालीमा भेटिन्छन ! कैलाली-कन्चनपुरमा राना थारुहरु रहदै आएका छन् ! कठरिया र राना थारुमा धेरै समानता पाइन्छ ! यी चार उपसमूहभित्र पनि धेरै अरु उपसमूहहरु रहेका छन् ! त्यस मध्ये कटकिहा, दहित, सातगौवा, चमार, मझगैया आदी रहेका छन् ! उही उपसमूह मा विवाह चल्दैन !
वर्ण र रहनसहन –
मझौला कदका थारुहरु वर्णको हिसाब ले गँहुगोरा हुन्छन ! केही काला तथा नाक थेप्चो, बाक्लो ओठ र कस्सिएको मजबुत शरीर यिनीहरुको शारिरीक बनावटका बिशेषता हुन् ! पुर्व र पश्चिम का थारुको रहनसहन फरक छ ! पूर्वतिर पुर्व-पश्चिम दिशामा घर हुन्छ भने पश्चिमतर्फ उतर-दक्षिण दिशातर्फ मुख फर्काएर घर बनाइन्छ ! पश्चिम भन्नाले दांग र सोभन्दा पश्चिमलाई सम्झिनुपर्छ ! पुर्वतिर बिचमा आँगन र त्यसको वरपर घरहरु रहेका हुन्छन जुन मधेसका अन्य जातिहरुसँग मिल्दछ ! पश्चिमका थारुहरुको घरमा आँगन हुदैन, खुला आँगन रहेको हुन्छ ! पश्चिमतर्फ भान्साघरलाई भितर, देवता –कोठालाई देहुरार, सुत्ने कोठालाई कोनटी र पाहुना घरलाई ओबरा भनिन्छ ! ओबरा मूल घरबाट बाहिरपट्टि रहेको हुन्छ ! पुर्वी मधेसतर्फ देवता घर अर्थात् कुलदेवता रहेको घर लाई गोसाई घर भनिन्छ ! भान्साघरलाई भान्सा वा चुल्ही घर भनिन्छ ! पाहुना घरलाई दरबाजा, बसघरा वा दलानी भनिन्छ ! यो मूल घरबाहिर रहेको हुन्छ ! त्यस्तै गाईवस्तु राख्ने घर हुन्छ जसलाई गोहली भनिन्छ ! नवलपरासी-कपिल्वास्तुतिर गोठलाई घारी भनिन्छ ! मधेसका अन्य जातिसँग पूर्वका थारुहरुको रहनसहन लभग मिल्दछ ! घरहरु प्राय : बाँसका भाटा र त्यसमाथि माटाले लिप्ने गरिन्छ ! थारुका घरका भित्तामा हुन्दु देवी –देवता र चराचुरुंगीका चित्रहरु कोरिएको हुन्छ ! घर – आँगन सफा हुन्छ ! फुस अर्थात् खरले छानो छाइएको पाइन्छ ! हिजोआज खरको सट्टा टाईलले घर छाईन्छ ! जंगल नजिक भएको ठाउँमा काठका घरहरु रहेका हुन्छन ! यस्ता घरहरु प्राय: दुई तलासम्मका हुन्छन ! पूर्वका थारु हरुको घरमा विभिन्न चराचुरुंगी र देवी देवता का चित्र हरु कोर्ने चलन छ भने पश्चिम तर्फ कम छ , तर अहिले पूर्वदेखि कपिलवस्तुसम्म हेर्दा पक्की घरहरु प्रशस्तै देख्न सकिन्छ !
थारुहरु हाँस, परेवा, कुखुरा, बाख्रा, र गाईवस्तु पाल्दछन् ! कहिँ-कतै विशेष गरी पश्चिम मधेस र उतर राजमार्गको छेउछाउमा बस्दै आएका थारुहरुले सुँगुर पनि पाल्दछन ! थारुहरु माछा मर्न खुबै मन पराउँछन् ! खोला-नदीको छेउछाउमा बस्ने थारुहरुको घरमा माछा मर्ने जाली देख्न सकिन्छ !
पूर्वका थारु हरुको परम्परागत वस्त्र पुरुषतर्फ धोति, चौबन्हा (माथि लगाइन्छ), गम्छा र महिलातर्फ अचरा खड्की ( जुन तलदेखि माथिसम्म ढाक्ने गरी लगाइएको हुन्छ) हुन् ! तर अहिले का विवाहित महिला हरुले साडी र ब्लाउज लगाउदछन ! पश्चिम मा पुरुष तर्फ लगौंटी, गन्जी, गम्छा र महिलातर्फ लहंगा ( (कम्मरमुनि लगाइन्छ, यो कालो-हरियो रंगको हुन्छ) र ब्लाउज (सर्ट जस्तै) परम्परागत वस्त्र हुन् ! कोशीदेखी कपिलवस्तुसम्मका थारुहरु कुर्ता सुरुवाल र विवाहिता महिलाहरु प्राय: साडी लगाउने चलन छ ! पुरुषहरु धोति र कमिज लगाउने गर्दछन !
थारु स्त्रीहरु गोदना गर्न र गहना लगाउन मन पराउछन् ! कानमा ठुला-ठुला प्वाल पारेर गहना लगाउछन् जसलाई लोरकलोसी र मछरिया भनिन्छ ! गलामा हसुली, जिझिर (सिक्काको माला), हातमा चुरा, ढोका पाखुरामा पाट, खुट्टामा पैरी, बाला आदी लगाउने चलन छ ! नाकमा नथुनी विशेषगरी विवाहमा लगाउने चलन छ ! नाक र कानमा बाहेक अरु गहनाहरु प्राय: चाँदीका हुन्छन !
जन्म, विवाह र मृत्युसंस्कार-
थारु जातिमा पनि जन्म, विवाह र मृत्युसंस्कारलाई उच्च महत्वका साथ मनाउने चलन छ ! पूर्वदेखि पश्चिमका सबै थारुमा छैटौ दिन मा छैटी अर्थात् छठीहार गर्ने गरिन्छ ! यसमा बच्चा र आमा लाई चोख्याउने गरिन्छ र कही-कतै राति आफन्तलाई बोलाएर भोज पनि गर्ने चलन छ ! तर सबै थारुमा छैटीकै दिन भोज दिने चलन छैन ! मधेसमा मुसलमानबाहेक सबै जातिमा छैटी गर्ने चलन छ ! छैटीउपरान्त मात्र आमा र बच्चा लाई चोखो भएको मानिन्छ ! छैटीपुर्व घटवा करैना आफ्नै घरका मान्छेले गर्दछन, यो दांग र पश्चिमका थारुमा गर्ने चलन छ ! पाँच वा छ दिनमा घटवा करैना गर्ने चलन छ जसमा बछ्को नाभी राम्ररी सुकिसकेपछी सुत्केरी आइमाईले घटवा अर्थात् घाट वा पानीको मुहानमा गएर नुहाइधुवाइ गरी गोबरको एउटा सानो थुप्रो बनाईत्यसमा सिन्दुर राखी पुजा गर्दछन र चोख्याईन्छ ! यसलाई छठठी पनि भन्न सकिन्छ ! बरही पनि गर्ने चलन छ ! बाह्रौ दिनमा भोज दिने चलन पश्चिमा रहेको छ ! कंही-कतै यसै दिन बच्चाको नामकरण हुन्छ ! पश्चिमतिर छठठीमा कंही-कतै ब्राह्मण बोलाई पुजा गर्ने चलन पनि छ ! पाँच बर्ष भित्र बाछाको मुण्डन गरिन्छ, यसमा आफन्तहरुलाई भोज दिने चलन छ ! पश्चिमतिर मुण्डनलाई भ्वाज भनिन्छ !
नवलपरासी-कपिलवस्तुका थारुहरुमा छैटीको बिशेष महत्व छ ! बाह्रौ मा आफन्तहरुलाई बोलाई भोज दिने चलन छ ! पूर्वतिर थारुमा मुण्डन अर्थात कपाल काट्ने चलन पनि छ ! नवलपरासी-कपिलवस्तुका थारुमा पनि मुण्डन अनिवार्य गर्ने गरिन्छ ! यो एकदुई बर्षभित्रै गरिन्छ ! अन्नप्राशन अर्थात् भातखुवाई थारुहरुमा गर्ने चलन छैन , तर केही सम्पन्न थारुहरुले गर्ने गर्दछन ! यसको कारण पहाडी प्रभावरहेको छ !
पुर्व र पश्चिम का थारु हरुमा विवाह संस्कार फरक फरक ढंगले गर्ने गरिन्छ ! पूर्वतर्फ मागी विवाह प्रचलित छ ! थारु जातिमा केटालाई केटी र केटीलाई केटो खोज्ने काम गर्ने लमिको भूमिका महत्वपूर्ण हुन्छ ! पूर्वतर्फ लमीलाई लारंग भनिन्छ ! केटा र केटी दुवैलाई थाहा नदिई हेर्ने चलन छ जसलाई बहरचक्क भनिन्छ ! त्यसपछी केटोतर्फ बाट केटीकँहा जाने गरिन्छ र सबै बसेको ठाउँमा आएर लोटामा पानि राखेर जान्छे ! यसरी केटी हेर्ने गरिन्छ यसलाई देखासुनी भनिन्छ ! त्यसपछी केटीको तर्फबाट विवाहको कुराकानी छिनोफानो गर्न केटाकँहा जाने गर्दछन ! यसमा सबै आफन्त र छिमेकीलाई लाने चलन छ ! तर अहिले नजिकका आफन्तहरु मात्र जाने गर्दछन ! केटाको तर्फबाट सबैलाई भोज दिनुपर्दछ ! यसमा थाल वा सुपमा सुपाडी पान, दुबो, मैन र टका (रुपीयाँ) राखेर दुबैबिच साटासाट गरिन्छ र सम्धी-सम्धी गला मिलाउछ्न ! यसलाई सम्धी जोडान भनिन्छ ! साटासाट गरिएका पान सुपारी पच्छीसम्म राख्नुपर्छ ! कुनै कारणवश विवाह हुन् सकेन भने पान-सुपाडी फर्काउनुपर्दछ ! यसलाई सहकटी पनि भनिन्छ ! यो विधिमा दुलहालाई पनि उपस्थिति गराइन्छ ! सहकटी भैसकेपछि केही समयको अन्तरालमा लारंगको सहयोगमा विवाहको दिन तोकिन्छ ! पहिले-पहिले सहकटी गरेको एक बर्ष पछी मात्र विवाह गर्ने चलन थियो , तर अहिले केही दिनको फरकमा विवाह गर्ने चलन छ ! तीन पुस्ता भित्र उही गोत्रमा विवाह गरिदैन ! विवाह मडवा ( मण्डप) मा गरिन्छ ! आँगनको बिचमा बाँस का भाटालाई रंग लगाई रंगीचंगी कागजले सजाइएको हुन्छ ! खर ले छाए को हुन्छ ! केराको थुम चारवटा कुनामा राखिएको हुम्छ ! मधेसका हरेक जातिमा मण्डप बनाएर विवाह गर्ने चलन छ ! विवाहमा जजमानी ब्राह्मण र लौवा बाभन (हजाम ब्राम्हण) दुबै हुन्छन ! मध्य्मधेसका थारुहरु विवाहमा ब्राह्मण अनिवार्य चाहिन्छ ! अहिले स्वयंवर गर्ने चलन बढ्दो छ ! स्वयंवरपछी मडवामा बिहे को रस्म सुरु हुन्छ ! विवाह रातको समयमा हुन्छ ! पूर्वका थारुहरुमा कन्यादान गर्ने चलन पाइन्छ ! बिहानै खाजा र कंही-कंही खाना खुवाएर बिदाई गर्ने चलन छ ! अहिले बालविवाह नगण्य रुपमा रहेको छ ! दाइजो को चलन कंही-कतै देख्न सकिन्छ ! पेसागत जातमा जस्तै पैसा माग्ने चलन नगण्य रहे पनि सामानहरु जस्तै मोटरसाइकल, टी.वी. आदि माग्ने चलन बढ्दो छ ! थारुहरुमा एक पति एक पत्नी र जीवनमा एक पटक विवाहको सिद्धान्त रहेको छ ! विवाहमा महिलाद्धारा थारु गीतहरु गाउने चलन छ ! यसरी पुर्वी र मध्य्मधेसमा विवाहको चौथो दिनमा चतुर्थी हुन्छ !
नवलपरासी-कपिलवस्तुतर्फ केटीको तर्फबाट केटो हेर्न जान्छन् र मन परेमा केही पैसा दिई बरछेकाइ (बर छेक्नु) गरिन्छ ! पुन: केटाको तर्फबाट केटीकँहा गई केटी हेरिन्छ र पैसा दिने चलन छ ! केटाले मन पराएपछी विवाह्लो मिति तोकिन्छ र विवाह हुन्छ ! विवाह हुनुपुर्व डिहीथान अर्थात् ग्रामदेवताकँहा अनिवार्य पुजा गर्ने चलन छ ! पश्चिमका थारुमा पूर्वको तुलना मा कम विधिहरु हुने गर्दछ ! पश्चिमतर्फ विवाहलाई भ्वाज भनिन्छ ! केटा र केटी दुबैको तर्फबाट विहेको कुरा चलाउने चलन रहदै आएको छ ! बालविवाह नगण्य छ ! प्राय: मागी विवाह नै हुने गर्दछ ! उहरी (भगाएर लैजाने ) विवाह पनि पाइन्छ ! केटीको तर्फबाट केटाको घर जाने चलन छ र विवाहको कुरा मिलेमा दुबै सम्धीले एकअर्काको निधारमा दहि –अक्षताको टिका लगाइदिने चलन छ, लेनदेन गरिन्छ ! लेनदेन स्वेच्छाले गरिन्छ ! केटि पक्ष बाट ल्याइएका समहरु केटा पक्षलाई दिइन्छ ! त्यही दिन खसी, बोका, कुखुरा, सुँगुर आदि काटेर गाउँलेलाई भोजभात खुवाउने चलन छ !यसबाट विवाह पक्का भएको बुझिन्छ ! केही दिनभित्र केटा सहित केटीको घरमा गएर टीका टालो गरिन्छ ! त्यसै दिन विवाहको साइत जुराइन्छ !विवाह मण्डपमा हुन्छ ! विवाह रातको समय मा नै हुने गर्छ, तर पहाडतर्फ दिनमा विवाह हुने गर्दछ ! यसो हुनुमा भौगोलिक अवस्था प्रमुख कारण हून सक्छ ! जेहोस विवाह सुरु हुनु पुर्व देवताकोठा देउहर्मा कुलदेवताको पुजा अनिवार्य गर्नु पर्छ ! बेहुलो सेतो जामा र पगरी लगाएर केटी कहाँ जाने गर्दछ ! बयालिस जातिमा झै दुलाहालाई स्वयम्वरमा लानु अघि पर्सने गरिन्छ ! कुलदेवता कहाँ पुजा सकिए पछी मण्डपमा विवाह हुन्छ ! विवाह ब्राह्मणद्धारा गरिन्छ ! जन्ती र बेहुला–बेहुलीलाई भोलिपल्ट खाजा वा खाना खुवाएर बिदाई गरिन्छ ! त्यसको बारह दिन भित्र दुलहा – दुलही केटी पक्षकहाँ आउने चलन छ !
थारुहरु मृत्युसंस्कार हिन्दु विधिअनुसार नै हुने गर्दछ ! यो अन्त्येष्टिलाई पश्चिमतिर सतगत भनिन्छ ! पूर्वका थारुहरुको मृत्युसंस्कार बयालिस/पेसागत जातिहरु झै गरिन्छ ! मृतक लाई खोलाको छेउ मा जलाउने चलन छ ! उतराइन दिशामा मृतकलाई राखी ज्येष्ठ पुत्रद्धारा दागबती दिने चलन छ ! जेठो छोरालाई कर्ता भनिन्छ, उसले सेतो कपडा लगाउनु पर्दछ, साथै नुन बार्नुपर्छ ! पश्चिमतिर मलामीहरुले लास जलाएर फर्किने बेला फर्कने बाटोमा काँडा लगाई वा बाटो मा कोदालोले खाडल खनी ( मुर्दाको आत्मालाई फर्कने बाटो छेकेको रुपमा) नुहाइधुवाइ गरि फर्कने चलन छ ! मलामी जानेले तीन दिनमा कपाल काट्ने चलन छ, अरुहरुले दस दिनमा ! नह्केश्देखी तीन दिन सम्म भोज दिने चलन छ ! बर्षमा एक पटक बरखी गरिन्छ ! जेठो चोरले जीवनभरी बरखी गर्नुपर्ने अनिवार्यता छैन ! तेह्रौ दिनमा कर्मकाण्ड समाप्त हुन्छ ! कंही-कतै बाह्रौ दिनमा पनि हुन्छ ! यिनीहरुमा एकदिन भोज दिने चलन छ ! सबै थारुहरुमा बर्षमा एक पटक बरखी बार्ने गरिन्छ ! दांग – देउखुरीका केही थारुहरुमा मृतकलाई गाड्ने चलन पनि छ , तर अहिले अधिकांशले जलाउने गर्दछन !
धामी-झाक्री र भूतप्रेत: हरेकको घरमा कुलदेवता राख्ने चलन छ ! पूर्वतर्फ गोसाइघर भनिन्छ ! प्राय: गोसाइघरमा सुँगुर लाने चलन छैन ! त्यस्तै गाउँ पिच्छे ग्रामदेवता रहेको हुन्छ जसलाई बरमथान पनि भन्ने गरिन्छ ! पश्चिमतिर भयाँरथान पनि भन्ने गर्दछन ! यस्ता ग्रामथानमा गर्नेलाई पश्चिममा गरवा वा कसै-कसैले गुरुवा पनि भने गर्दछन ! पूर्वतिर ग्रामधामी भन्ने चलन छ ! सप्तरीतिर जैथरैत पनि भनिन्छ ! यिनीहरुले तन्त्र मन्त्र जानेका हुन्छन ! थारुहरुमा यस्ता पुजारीहरु जन्मजात हुने चलन छैन ! जसले तन्त्रमन्त्र र पुजापाठ गराउन सक्छन तिनीहरु धामी हुने चलन छ ! कुलदेवता र ग्रामदेवता लाई विभिन्न समय र उत्सव हरुमा पुजा गर्ने र सुँगुर, पाठापाठी, परेवा, हाँस आदिको बलि दिने चलन छ ! तर शिक्षित र सम्पन थारुहरुमा सुंगुरको बलि दिने प्रथा छैन ! कुनै पनि शुभ कार्य गर्दा सबैभन्दा पहिले यी देवताहरुको पुजा अनिवार्य मानिन्छ ! थारुहरुमा धामी र गरवाको उच्च स्थान रहदै आएको देख्न सकिन्छ ! नवलपरासी-कपिलवस्तुतिर धामीलाई ओझा वा सोखा भन्ने गरिन्छ ! त्यस्तै बोक्सीलाई टोनाहिन भनिन्छ !
अन्य मधेसी समुदायजस्तै थारुहरु पनि भूतप्रेतमा धेरै विश्वास गर्ने गर्छन ! पूर्वतिर बयालिस जातिहरुमा पाइने सबै खाले भूतप्रेतहरुप्रती थारुहरुमा विश्वास पाइन्छ ! विशेषगरी डायन, जोगिन र मसान भूतहर रहेका छन् ! सम्भवत: यिनीहरु जंगलको छेउछाउमा बस्दै आएका हुनाले पनि यिनीहरुमा भूतप्रेतप्रति बढी विश्वास रहेको मान्न सकिन्छ ! भैसीको बच्चा भएर भैसीको दुध खाइदिने जमजुट भुतवा पश्चिमतिर पाइन्छ ! पश्चिममा विशेषगरी दंग्तिर गाउँका सिमानाहरुमा मरिवा भुत रहेको विश्वास गरिन्छ! कहिलेकांही मान्छेहरुसँग भेट भइहालेमा कुस्ती खेल्छ भन्ने भनाई छ ! भूतप्रेतलाई धामी वा गरवाले विशेष मन्त्र बाट नियन्त्रनमा लिएर यसबाट मुक्ति दिलाउँछन भन्ने विश्वास प्रगाढ रहेको छ ! पूर्वतिर डायन र खराब नजरबाट बच्न डोराडोइर (कन्दनी) लगाउने चलन छ !यो कम्मरमा बधिन्छ र यसमा सानो राखिएको हुन्छ ! हरेक घरमा लसुन झुन्ड्याएको हुन्छ ! घरको बाहिर लसुन झुन्ड्याई राख्नाले भूतप्रेत आउदैन भन्ने मान्यता रहेको छ ! हनुमानचालिसा पनि पदने गरिन्छ !
धर्म र चाडपर्व :
थारुहरु सनातन हिन्दु न् भएपनि व्यावहारिक रुपमा यिनीहरु हिन्दु धर्म मान्ने जाती हुन् ! यिनीहरुको एतिहासिक काल्खंद्लाई गौतम बुद्ध सँग जोडे पनि व्याहारिक रुपमा यिनीहरुमा बौद्ध धर्मका कुनै कृत्यहरू चल्दै आएका देखिदैन ! यिनीहरुमा देवीको पुजा गर्ने चलन छ, भाकल गर्ने चलन छ र कुलदेवता राख्ने चलन छ ! पश्चिन्तिर देवी-देवतालाई भयाँर भनिन्छ ! विभिन्न देवीहरुलाई चाडपर्व र संस्कारमा बलि दिने परम्परा रहदै आएको छ ! दशै तिहारमा बडो धुमधामले मनाउँछन् ! हिन्दुहरुले मान्ने सबैखाले देवी-देवताप्रती सम्मान रहेको पाइन्छ ! थारु जातिका सप्तरीका रामानन्द संघले थारुहरु बौद्ध धर्मावलम्बी हुन् भनेका थिए र उनको अग्रसरता मा सप्तरी र उदयपुरमा थारु बुद्धिजीवीहरु बौद्ध पहिचानको विकासगर्न लागिपरेका छन् ! यसमा विशेष गरि श्रीलंकाका बौद्ध संघ-संस्थाहरुले सघाइरहेको पाइन्छ ! सप्तरीका एक थारुको छोरा भिक्षु बनेर श्रीलंकामा पढ्न गएबाट यी कुराहरु बुझ्ने अवसर प्राप्त भयो !
थारु जतिको सबभन्दा ठुलो पर्व दिपावली हो ! विशेष गरि पूर्वतिर सुकराती मनाउने चलन छ ! दिपावलीको औसीमा दिपावली गरि सुकरती मनाइन्छ ! सो दिन धान काटेर ल्याइन्छ र बेलुकीपख हुक्का (पातलो लठ्ठीको मुठा बनाई आगो बालेर खेलाइन्छ र खेतमा फल्ने चलन छ) खेल्ने चालन छ ! सो दिन मिठा परिकारहरु खाने गरिन्छ ! त्यसको बिहान हलो, कोदाली आदिलाई सरसफाई गरि पुजा गरिन्छ ! यो मधेसका अन्य किसान जातिले मनाउने गरेका छन् ! अन्य चाडपर्वहरुमा नागपंचमी, जितिया, कृष्णाष्टमी, माघेसंक्रान्ति, शिवरात्री, होली, रामनवमी र सिरुवा प्रमुख रहेका छन् ! जितिया पुर्व र मध्य्मधेस्तिर मनाइन्छ ! यो महिलाले गर्ने पर्व हो ! यस चाडमा दाजुभाइहरुले विवाहित दिदीबहिनीहरुलाई उनीहरुको घर गइ अनिवार्य रुपमा ल्याउनु पर्दछ ! तीन दिन सम्म यो चाड मनाइन्छ र महिलाले व्रत लिने चलन छ ! पश्चिमतर्फ यो मनाउने चलन छैन ! पूर्वका थारुहरुमा पनि छठ पर्व मनाउने चलन बढ्दो छ ! माघे संक्रान्ति थारुहरुको बडो धुमधाम सँग मनाउने गर्छन ! पश्चिमतर्फ यसलाई नया बर्षका रुपमा मान्ने चलन छ ! यस दिन देखि कुनै कामको थालनी गरेमा शुभ हुन्छ भन्ने मान्यता रहेको पाइन्छ ! ठाउँ-ठाउँमा मेला पनि लाग्ने गर्दछ ! आफन्तहरुलाई भोज दिइन्छ ! माघे संक्रान्तिमा घिउ-चामलको खिचडी ( जाउलो), तिल, मुरही, आदिको लड्डु तथा लाई (सक्खर राखी बनाइएको मुर्हिको लड्डु) र बगिया ( चामलको पिठोलाई उम्लेको पानीमा राखेर तयार गरिन्छ) खाने चलन छ ! पश्चिमतिर बघियालाई ठिकरी भनिन्छ ! पहाडमा यस्तो चाकु खाने चलन छैन ! मधेसका हरेक जातिमा माघे संक्रान्तिका दिन यी परिकारहरु खाने चलन छ ! पुर्व र पश्चिम दुवैतिर नयाँ बर्ष बैशाख १ गते मनाउने चलन छ ! तर पूर्वतिर बैशाख १ गते सिरुवा पर्व मनाउने गरिन्छ, यस दिन सातु खाने चलन छ ! पुर्तिर बैशाखभरि थारु बस्तिहरुमा मेला लाग्ने गर्दछ ! त्यस कारण सिरुवाको महत्व थारु जातिमा बिशेष रहेको छ ! नवलपरासी-कपिलवस्तुतिर सिरुवालाई सतुवान भनिन्छ ! यस दिन सातु खाने चलन भएकाले सतुवान भन्ने गरिन्छ ! पश्चिमतिर नयाँ साललाई लावासालभन्ने गरिन्छ ! दसैमा यी जातिहरुमा बलि दिने गर्दछ ! दसैको अष्टमी र नवमीमा बलि दिने चलन छ ! बर्दियातिर नागपंचमीको दिन गुरिया पर्व मनाउने चलन छ !
खानेपानी र शौच :
थारु समुदायमा खानेपानीका लागि कुवा, ईनार र अहिले कलको प्रयोग हुदै आएको छ ! कललाई पश्चिमतिर नल्की भन्ने गरिन्छ ! बैज्ञानिक शुद्धताको हिसाबले धेरै ठाउँमा कलको पानीमा आर्सेनिक भेटिएको छ जुन स्वास्थको दृष्टिकोणले हानिकारक मानिन्छ ! गाउँमा पोखरी भेटिन्छ ! पहिले पहिले कल नहुँदा पोखरीमा भाडा माझ्ने, गाईवस्तुलाई पानी खुवाउने तथा नुहाउने र अन्य आवश्यक काम गरिन्थ्यो ! सहरी क्षेत्रमा आधुनिक किसिमले सरकारबाट खाने पानीको व्यवस्था गरिएको हुन्छ ! सहरी क्षेत्रमा शौचका लागि शौचालय घरैपिच्छे हुन्छ भने ग्रामिण क्षेत्रमा पढेलेखेका र पैसा हुनेहरुले शौचालय बनाउँछन् भने अधिकांश मानिसहरुको छुट्टै शौचालय छैन ! ग्रामिण क्षेत्रका थारुहरुमा गरिबी र अशिक्षाका कारणले शौचालय कमाए मात्रामा भेटिन्छ ! यसका लग्ही खोलो वा नहरको छेउ, बाटोको छेउ र झाडी प्रयोग गर्दछन् !
Share this:RedditLike this:Like Loading...	Filed under: Uncategorized « Sample Copy of UYFM membership Form मधेसमा भएका दलित जातिका परम्परागत पेसा र तिनीहरुको प्रचलित थरहरु »